Sidecar: Usoro Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Amazon | Martech Zone
Sidecar: Usoro Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Amazon
Tuesday, October 1, 2019 Tuesday, October 1, 2019 Douglas Karr
Amazon abụghị naanị ebe nrụọrụ weebụ e-commerce kachasị na weebụ, ọ bụkwa usoro mgbasa ozi na-eduga. Ọ bụ ezie na ndị na-ege ntị Amazon buru ibu ma ndị ọbịa amalite ịzụta, ịnyagharị ọwa na-egosi na ọ bụ ihe ịma aka.
Amalitere izu gara aga, Sidecar maka Amazon bu ikpo okwu nke ejiri AI di elu na nhazi asusu ejiri mee ya. Ikpokoro a na enyere ndi na ere ahia aka itinye atumatu data eweputara ma gosiputa omume kachasi nma iji nweta ego site na Ahịa Ngwaahịa Amazon, Branddị nkwado, na Ngosipụta Mgbasa ozi.
Site na ilekwasị anya na idozi nsogbu ịma aka maka ndị na-ere ahịa, ọ bụ ndọtị ebumpụta ụwa ka anyị wulite azịza nke na-aza nsogbu ndị ahịa anyị na-eche ihu na Mgbasa Ozi Amazon.
Mike Farrell, Onye isi oche ahịa na ọgụgụ isi ahịa maka Sidecar
Sidecar teknụzụ na-ejikwa njikwa ntuziaka rụọ ọrụ, na-akọwapụta akụkọ, ma na-enyere ndị ahịa ụlọ ọrụ aka ịzụ ahịa ohere ọhụrụ na Amazon.
Sidecar maka Amazon Uru:
Na-ebuli mkpọsa na-enweghị mgbu - Dabere na akpaaka Sidecar iji megharịa mkpọsa gaa na mgbanwe dị ka mmelite atụmatụ na arụmọrụ arụmọrụ.
Chekwa oge & guesswork - Belata mbibi nke ịmụ ọwa ọhụrụ. Ftgbanwe oge gị site na mgbasa ozi ngwa ngwa na atụmatụ azụmahịa na ndị ọzọ nke Amazon Flywheel.
Gwa usoro uzo ozo - Mfe tinye ihe ọmụma site na ọwa mgbasa ozi ndị ọzọ gị na Amazon iji kwalite usoro mmekọrịta ọnụ.
Weta nghọtahie na ikpesa - Nweta echiche doro anya banyere otu esi emepụta ihe na mgbasa ozi. Mee ihe dabere na otu mgbasa ozi si enyere gị aka.
Olee otú Sidecar maka Amazon Ọrụ
Site na teknụzụ Sidecar na-ejikwa usoro ahụ, ndị ọrụ ha raara onwe ha nye arụmọrụ ahịa ga-eso gị kesaa usoro ụzọ. Nsonazụ ahụ? Salesre ahịa ngwa ngwa na uru asọmpi siri ike ị nwere ike ịlele ma kọọ.
Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Nrụpụta - Zere isi ọwụwa nke iji aka gị na-ewu mkpọsa mgbasa ozi Amazon. Sidecar na-emepụta usoro mgbasa ozi kachasị mma site na ịnye ngwaahịa iji rụọ ọrụ mgbasa ozi n'otu aka ahụ na ịtụkwasị ọnụ ahịa mara mma nke ndị na-ere ahịa kacha mma mgbe ha na-adọghachi azụ na-eme ihe ngosi dị ala. Igwe a na-akpaghị aka na-arụ ọrụ mgbe niile iji hụ na a na-emeziwanye usoro dabere na mgbanwe arụmọrụ ma ọ bụ dị ka agbakwunyere ngwaahịa ọhụrụ.
Njikwa ntozu Mgbasa Ozi - Wepu mkpa iji aka wepu ngwaahịa site na mkpọsa. Akpaghị aka usoro na-arụ ọrụ si a set nke ere ahịa-kọwaa azụmahịa iwu jikwaa ngwaahịa mgbasa ozi eligibility dabere na oke ma ọ bụ akara atumatu.
Njikwa Ajụjụ ọchụchọ - jirichaa ike gị iji tọghata nnukwu ebumnuche ịzụ ahịa yana mkpụrụokwu kwesịrị ekwesị. Iji nhazi asụsụ eme ihe, Sidecar na-enyocha nyocha ọchụchọ iji chọpụta okwu ndị ọhụụ na-eji iji chọpụta ngwaahịa gị. Sidecar na-enye nghọta na ọgaranya bara ụba na enweghị ma ọlị n'elu ikpo okwu Amazon.
Njikwa Elu - Mee mkpebi bidoro akpaghị aka. Onodu ogugu nke ndi Amazon n’egosiputaghi ezi oru, ndi n’ere ahia ime mgbanwe n’adighi nma. Sidecar na-agbanwe mmachi na mgbasa ozi ọ bụla na isiokwu iji bulie arụmọrụ nke ngwaahịa ọ bụla.
Nkwupụta na Nyocha data - Mepee data Amazon zuru ezu. N'adabaghị ya na windo mkpesa na-enweghị njedebe nke Amazon, teknụzụ Sidecar na-ekpughe arụmọrụ mkpọsa mgbasa ozi na iji izu atụ izu na izu na ọnwa. Nke ahụ na-enye gị nghọta doro anya banyere etu mgbasa ozi si emetụta uto.
Sidecar maka Amazon na-agbakwunye usoro ụlọ ọrụ ahụ dị na ntanetị, nke gụnyere nkwado maka shopping na ụgwọ ọchụchọ ọchụchọ na Google na Bing, yana mkpọsa n'ofe Facebook / Instagram na Pinterest.
Kwe ka ndị ọkachamara Sidecar kpughee ohere ọhụụ na Amazon site na nyocha ọrụ n'efu, na-enweghị ọrụ:
Nweta nyocha efu na Sidecar
Tags: Spdị Ahịa Nkwado AmazonAhịa Ngwaahịa Amazonsidecar maka amazon
Kedu mba na-agba Black Friday?
Ọ bụ njikọ aka n'ezie?